Abavelisi beNdebe ye-PET yokuNgcamla iFektri kunye nababoneleli
Iibhola ze-3oz zePlastiki ezineziciko
Ezi 3oz I-PET Iikomityi zeplastiki ezineziciko lukhetho olufanelekileyo lweesampulu, iincinithi, kunye nezahlulo ezisecaleni. Nokuba uvumela abathengi bakho ukuba bazame ibhiya entsha okanye unikezela iisampulu zedessert kumdlalo wezorhwebo, ezi ndebe zilungele ukwazisa abantu kwizinto abazithandayo kunye nesimbo sophawu lwakho.
Ukugqibezela ii-condiments, isosi, iziselo kunye neesampulu, ezi 3oz I-PET Iikomityi zeplastiki ezineziciko zenziwe ngezinto eziphinda zisetyenziswe. Izinto zePET kuphela kwento eluhlaza kwezi ndebe zingcamlayo. Ziyacaca ngekristale kwaye zinokuphinda zisetyenziswe kwakhona nge-100% kusetyenziso lwesibini.
Baphawule ezi 3oz I-PET Iikomityi zeplastiki ezineziciko, igama leshishini lakho okanye uphawu lwembonakalo yempawu engalibalekiyo yindlela elungileyo yentengiso. Ukushicilela ilogo yeyona ndlela ilungileyo yokukhuthaza iimveliso zakho kunye nokwazisa abantu abaninzi uphawu lwakho. Sinikezela ushicilelo olukhethekileyo kwaye ukuyila. KuleItyala, ukunceda ishishini lakho ukugcina indawo kwaye ufumane oko kufuneka ukuba kusebenze ngokukuko.
Shanghai COPAK Industry Co., LTD, eyasekwa ngo-2010, kunye ofisi yokuthengisa e Shanghai kunye mveliso e Zhejiang. I-COPAK yasekwa okokuqala njengomthengisi weengxowa zeplastiki kunye nefilimu yokupakisha ukutya. Ngo-2015, saqala ishishini kweekomityi PET neebhotile PET.
Njengomthengisi onamava, uCopak uya kukumamela, enze iingcebiso zobungcali kwaye uya kukuzisela izibonelelo ezingaphezulu. Umgangatho yingcambu, umthengi ngumgaqo. ICopak ihlala ithatha umgangatho kunye nenkonzo njengobomi, inikezela ngemveliso esemgangathweni kunye nenkonzo yokujonga ngentliziyo iphela.